LibreOffice 6.3.2 ikozvino yave kuwanikwa kugadzirisa angangoita makumi mashanu mabugs | Linux Vakapindwa muropa
LibreOffice 6.3.2 ikozvino yave kuwanikwa kugadzirisa angangoita makumi mashanu mabugs
Mavhiki matatu chete apfuura, Iyo Gwaro Foudation yakatanga iyo 6.3.1 version yehofisi yako suite. Iyo yakaburitswa munaGunyana 5 yaive yekutanga kugadziridzwa kuburitswa mune dzino dzakateedzana uye yakauya kuzogadzirisa anopfuura makumi masere mabugs anozivikanwa. Nhasi takazivisa yechipiri, LibreOffice 6.3.2, chitsva chitsva chinogadzirisa huwandu hwese makumi matanhatu emabugs. Pakati pembugs dzakagadziriswa pane mamwe zvakare akadzoreredzwa pakuyedza kubvisa nyowani, chimwe chinhu chinozivikanwa sekudzoreredza.
Kana iri kwenguva yakareba, ndinogara ndichizvirangarira nenzira iyoyo, pane mavhezheni maviri aripo, v6.3.2 yakaburitswa nhasi uye v6.2.7 yakaburitswa munaGunyana 5 pamwe chete nev6.3.1. Iyo Gwaro Nheyo Inoenderera mberi nekukurudzira LibreOffice 6.2.7 senge vhezheni yenzvimbo dzekugadzira, sezvo iine zvikanganiso zvishoma kwazvo kupfuura LibreOffice 6.3.2 iyo yagashira chete mabudiro maviri ekugadzirisa uye iine mamwe mabhugi. Iyo kambani inongokurudzira chete yakagadziridzwa vhezheni yeavo vedu vanoda kunakidzwa pamberi pezvinhu zvitsva.
LibreOffice 6.3.2 inosanganisira zvese zvitsva; LibreOffice 6.2.7, kugadzikana
Mushure memhando mbiri mumasvondo matatu, zvinotarisirwa kuti rinotevera rinosvika ratove muna november kana kupera kwaGumiguru. Chichava chitsva chitsva icho chinotarisa pakururamisa zvipembenene, pamwe zvishoma pane izvo zvakagadziriswa mushanduro yakaburitswa nhasi nekuti vatove vakaona mazhinji eakakosha madhigi.
Sekambani inoivandudza, isuwo hatikurudzire kuisa LibreOffice 6.3.2 pamakomputa panoitwa basa rakakosha neMunyori, Dhirowa, Math, Calc uye Impress. Muchokwadi, akawanda makuru ekuparadzira achiri kupa v6.2.7 yeiyo "Mahara" hofisi suite mumahofisi avo epamutemo nekuti ivo vanopa kuvimbika kwakakwirira nekuita.
LibreOffice 6.3.2 ikozvino iripo, pamwe chete nev6.2.7, kubva ku LibreOffice download webhusaiti yeWindows, Linux, uye macOS. Vashandisi veLinux vane yavo DEB uye RPM mapakeji anowanikwa, asi isu tinogona zvakare kuisa suite, zvakadaro tisina kukwidziridzira ku v6.3.2, mune ayo mavhezheni Snap y Flatpak.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » LibreOffice 6.3.2 ikozvino yave kuwanikwa kugadzirisa angangoita makumi mashanu mabugs
Yakaburitsa vhezheni itsva yeEmmabuntüs Debian Edition 3 1.0